ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကို sarcoidosis အထူးကု၏အကူအညီဖြင့်ရေးသားပြုစုထားသည် ဒေါက်တာအက်စ် Walsh, အတိုင်ပင်ခံအရေးပြားရောဂါအထူးကု, ဓမ္မရာဇဝင်ကောလိပ်ဆေးရုံမှ, လန်ဒန်။
Erythema Nodosum အသုံးအများဆုံး sarcoidosis related အရေပြားအခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာမကြာခဏရောဂါ၏စူးရှသောပုံစံကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
မကြာခဏ3မှ6ပတ်ကြာအပြီးကောက်ကာငင်ကာတိုးတက်ကောင်းမွန်, ထိုကဲ့သို့သော paracetamol နဲ့နဲ့ Ibuprofen အဖြစ်ရိုးရှင်းသောကိုက်အခဲပျောက်ဆေးလက္ခဏာများနှင့်အတူကူညီပေးနိုင်ပါသည်
6 လအတွင်းမှာ 80% အမှုပေါင်းအမာရွတ်မပါဘဲလုံးဝအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ
erythema nodosum နှင့်အတူလူနာအများစုမှာ sarcoidosis (ဥပမာဗက်တီးရီးယားသို့မဟုတ်ဖန်းဂတ်စ်ကူးစက်မှု) ထက်အခြားအခြေအနေများရှိသည်။ ထို့အပြင်အချို့ဆေးဝါးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤသည်အရေပြားအခွအေနေအစဉ်အမြဲအလိုအလြောကျ sarcoidosis ညွှန်ပြမထားဘူး။
Lupus Pernio လည်း sarcoidosis အတွက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
များသောအားဖြင့်နှာခေါင်းနှင့်ပါး၏ bridge ကိုဖြတ်ပြီးအပြာ / အနီပြားချပ်ချပ် Discoloration အရောင်, ဒါမှမဟုတ်ရောင်ရမ်းခြင်း,
မျက်နှာ, နား, လက်ချောင်းများသို့မဟုတ်ခြေချောင်းအပေါ်ဖြစ်ပေါ်
တစ်အရေပြားအထူးကုဆရာ (အထူးကုအသားအရေဆရာဝန်) ကိုရည်ညွန်း Lupus Pernio နှင့်အတူလူနာတွေအတွက်လိုအပ်ပါသည်။
အရောင်အနီရောင် / အဝါရောင်မှအပြာ / အနီအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်
အရေပြား sarcoidosis နှင့်အတူလူနာတွေဖြစ်တဲ့အဆုတ်နှင့်အသည်းကဲ့သို့သောအခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်အကဲဖြတ်ရပါမည်။
အသားအရေ sarcoidosis ၏တိုးတက်မှုများအားဖြင့်အဆုတ်အတွက်အနာရောဂါလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်စောင့်ရှောက်ခြင်း, ကွဲပြားခြားနားသည်။
အများဆုံးကိစ္စများတွင်တစ်ဦးအရေပြားအထူးကုဆရာ (အထူးကုအသားအရေဆရာဝန်) ကအရေပြား၏သုံးသပ်ချက်ကိုလုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
Sarcoidosis အရေပြားပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အထူးနှင့်ပုံမှန်အာရုံစိုက်:
အရေပြားပေါ်မှာမှောင်မိုက်-အရောင်ပင်အဖြူသို့မဟုတ်အစက်အပြောက် (hypo- နှင့် hyperpigmentation) ။
သင်သည်သင်၏အသားအရေအတွက်မဆိုအပြောင်းအလဲများကိုသတိထားမိပါကဤအသင့်ဆရာဝန်များက check လုပ်ထားကြသည်လည်းပညာရှိဖြစ်၏။
Corticosteroid တက်ဘလက် (e.g. prednisolone) may be prescribed for severely disfiguring disorders and conditions that do not heal spontaneously. The treatment with these drugs usually takesanumber of months. Prescriptions will only be given in the most serious of cases due to adverse side effects of corticosteroids.
Immunosuppressant မူးယစ်ဆေးဝါးများ inhibit cell division and are only prescribed if corticosteroids do not provide sufficient recovery. Methotrexate is an example of suchamedication. Although your GP may be able to provide ongoing prescriptions, these medications should be supervised byaconsultant dermatologist.
SarcoidosisUK therefore recommends that patients with sarcoidosis do not get tattoos, particularly those patients with existing skin sarcoidosis. If you are concerned about existing tattoos or would like to discuss your options, contact the SarcoidosisUK သူနာပြုတိုင်ကြားမှု or your GP.
ဆက်ဖတ်ရန်: Tattoo Sarcoidosis (Lyons, A., Brayman, G. & Tahhan, S. J GEN INTERN MED (2018) 33: 128.)